निद्रा लाग्दैन ? यो विधि अपनाउनुभयो भने एकैछिनमा फुस्स निदाइन्छ ! - समायोजन खबर
निद्रा लाग्दैन ? यो विधि अपनाउनुभयो भने एकैछिनमा फुस्स निदाइन्छ !
शुरूमा जिभ्रोलाई अघिल्लो दाँतको भित्रपट्टि मुखको च्यापुमा लगेर टाँस्नुस् । त्यसपछि बिस्तारै सास तान्नुस् अनि मनमनै चारसम्म गन्नुस् ।